Xoogag Jihaadi ah oo Askari Faransiis ah ku dilay dalka Maali. Askar Baardheere lagu dilay iyo saldhigyo ay ku sunaayeen ciidamo shisheeye oo la weeraray. Melleteriga Burkina Faso oo inqilaab ku riday xukuumaddii madaxweyne Christian Kaboré. Soo duulayaasha AMISOM oo Shaar cusub loo gelinayo si ay usii gumeystaan Soomaalida [Warbixin]. Mas'uul katirsan maamulka degmada Kaxda oo ku dhintay qarax miino. Xukuumadda Rooble oo Ururka ONLF ka saartay liiska 'Argagaxisada'. Weerar 8 gaari lagu gubay oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Lamu. Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo ku dhintay Weerar Muqdisho ka dhacay. Mas'uul katirsan Golaha Melleteriga Suudaan oo socdaal ku tagay Addis Ababa. Saldhigga Ciidanka Kenya ee Cabdalla Biroole oo weerar culus lakulmay. Al Qaacidada Jaziiradda Carabta oo sheegtay in duqeyn lagu dilay Hoggaamiyaheedii dhanka ciidanka. Taliska AFRICOM oo AMISOM ku dhaliilay in ay xakameyn waayeen awoodda Al Shabaab.
Wednesday August 25, 2021 - 14:59:13
Gaarigan waxaa lahaa ilaalada gaarka ah ee Qoor Qoor
Xafiiska Warfaafinta ee Xarakada Al-Shabaab ayaa faafiyay sawirrada weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ku qaadeen saldhiga ciidanka DFS ee deegaanka Cammaara ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 35 askari, kuna dhaawaceen tiro kale.
Weerarkan oo dhacay aroornimadii hore ee shaley ayaa ku bilowday qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kadibna waxaa xigay ciidamo aad u fara badan oo u daatay xerada kuwaas oo cagta mariyey askartii ka bad-baaday qaraxa.
Ugu yaraan 18 gaari oo ay ku jiraan gaadiid casri ah oo ay wateen ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Galmudug Axmad Kaariye Qoorqoor ayey Al-Shabaab kusoo furteen dagaalka, halka sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanado ciidan oo taalay xerada sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Weerarkan ayaa ahaa midkii 3aad ee laba todobaad gudahiis ay Al-Shabaab cagta ku mariso ciidanka maamulka Galmudug, waxaana xusid mudan in todobaadkii lasoo dhaafay ay kooxda cagta marisay ciidankii ku sugnaa saldhigyada Cadakibir iyo Qeycad ee koonfurta Mudug.
Sawirada qaar sooma gudbin karo sababtoo ah waxaa lagu arkayaa askar si ba'an loo xasuuqay oo daadsan gudaha iyo hareeraha xerada.
kusoo biir Channelka somalimemo Telegram
Kumuu ahaa dagaalyahankii fuliyay weerarkii agagaarka Afisyooni ee lagu beegsaday saraakiisha Caddaanka? [Dhageyso].
100 qof oo la dhigay Isbitaalka deegaanka Dhoobleey.
Faah Faahin: Ciidamada Wilaayada Islaamiga Sh/dhexe oo weerar khasaara dhaliyay ku qaaday deegaanka Qalimoow.
Ciidanka Al-Shabaab oo la Wareegay Deegaan ku Dhow Magaalada Cadaado
Tacshiirad ay ku dhinteen Askar iyo qof Shacab ah oo dhacday deegaanka Guriceel.